प्रविधि – Page 17 – Banking Khabar
एनसेललाई बाध्यात्मक स्थिती : कर नतिरे पुँजी बढाउन नपाउने
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको पुँजी वृद्धिसम्बन्धि प्रस्ताव स्विकृत नहुने भएको छ । सरकारलाई पुँजीगत लाभ कर नतिरेको भन्दै संसदको अर्थ समितिले एनसेल प्रालीको सबै व्यवसायिक योजनलाई रोक्दै पुँजी बृद्धिको प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार विहान सिंहदरवारमा …
कसरी बढाउने ट्विटरमा रिट्विट ? यसो भन्छ अध्ययन
फेसबूकमा लाइक्स र ट्विटरमा रिट्विटको मोह उस्तै हुन्छ । यदि धेरै रिट्विट पाउने चाहना छ भने बिहानभन्दा बेलुकाको समयमा ट्विट गर्नु राम्रो हुन्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनले यसको पुष्टि गरेको छ । अध्ययनले कार्य दिनको बेलुका ५ बजे ट्विट …
सुरक्षाका लागि सेक्युरिटी लक : कुन कति सुरक्षित ?
तपाईँ आफ्नो स्मार्टफोनको सुरक्षाका लागि कस्तो सेक्युरिटी लकको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? स्मार्टफोनमा सेक्युरिटी लक गर्ने थुप्रै तरिकाहरु छन् । जसमध्ये, पिन, प्याटर्न लक, पासवर्ड, फिङ्गर प्रिण्टलगायत विभिन्न तरीकाको प्रयोग हुने गरेको छ । प्याटर्न लक बढी लोकप्रिय भएजस्तो देखिएपनि फिंगर …
सिंहदरबारभित्र अब अत्याधुनिक ‘डेटा सेन्टर’
सरकारी डेटाहरुको सुरक्षाका लागि उच्च प्रविधियुक्त डेटा सेन्टर खोलिने भएको छ । शनिबार आव ०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारभित्रै डेटा सेन्टर खोलिने बताए । डेटा सर्भर स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट छुट्याएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले …
संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली कम्पनिहरु : कुन मुलुकका कति (विवरणसहित)
आजको विश्वमा हरेक क्षेत्रमा कडा प्रतिष्पर्धा छ । मुलुक मुलुक बिचमा प्रतिष्पर्धा छ, राज्य राज्यबिचमा प्रतिष्पर्धा छ, समाज समाजबिचमा प्रतिष्पर्धा छ , व्यक्ति व्यक्ति बिचमा पनि प्रतिष्पर्धा छ । हरेक व्यक्ति प्रगति र सफलताको खोजीमा छ । यसै प्रवृत्तिका कारण …